Khasaaro ka dhashay weerar bambaano oo ka dhacay Shabeellaha Hoose – Borama News Network
Weerarkaasi bambaano ayaa waxaa xalay lagu qaaday Bar-koontorool oo Ciidamo ka tirsan kuwa Daraawiishta Koonfur Galbeed ku leeyihiin degmada Walanweyn ee Gobolka Shabeellaha Hoose, waxaana ka dhashay khasaaro kala duwan.
Goobta weerarka Bambaano lagu qaaday ayaa waxaa ay ku taal dhanka galbeed wadada aada magaalada Beydhabo ee xarunta Gobolka Baay, waxaana daka ugu badan ee wax ku noqday ay yihiin Ciidamo ka tirsan kuwa Maamulka Koonfur Galbeed.
Gooboogayaal ayaa waxaa ay sheegen in ilaa Shan askari oo ka tirsan ciidamada Daraawiishta Koonfur Galbeed oo ku sugnaa Barta-koontorool, isla markaana weerarka kadib la maqlay rasaas farabadan oo ciidamada ay rideen.
Askarta ku dhaawacantay weerarkaasi bambaano ayaa waxaa la geeyay Isbitaalka degmada Walanweyn si loogu daweeyo, waxana la sheegay in weerarkasi kadib ciidamada Daraawiishta Koonfur Galbeed ay sameeyeen howlgal ay ku baadi goobayeen dadkii ka dambeeyay weerarkaas.
Degmada Walanweyn ee Gobolka Shabeellaha Hoose ayaa labadii sano ee la soo dhaafay waxaa kajiray xaalado amn I darro oo ay ugu weyn tahay dagaalo laba maleeshiyo Beeleed ku dhex-maray Gudaha iyo daafaha degmada Walanweyn.
Madaxweynaha Tanzania Oo Si Adag Uga Digay Talaalka Covid-19 Iyo Sobobta
Puntland Iyo Jubaland Oo Ku Baaqay Shir Deg Deg Ah Iyo Ujeedada Shirkaasi
Masar Oo Gacanta Ku Dhigtay Hub Iyo Darooga La Soo Galinayay Gudaha Dalkaasi
Bnnstaff Bnnstaff April 19, 2021
Xukuumada Somaliya Oo Warka Soo Saartay Kulanka Raysal Wasaare Rooble La Qaadanayo Midawga Murashaxiinta
Dowlada Somaliya Iyo Midawga Yurub Oo Heshiis Muhiim Ah Kala Sexeexday